Mhoro adblock mushandisi ...
Zvinoita sekunge warasika zvishoma…
Nazi Germany mabhuku
Nazi yeGerman inotaura - Adolf Hitler
Nazi yeGerman inowira - kutonga kwekutanga kweNazi
Nazi Germany crossword - hupenyu uye basa
Nazi yeGermany inovava - mabviro eNazi
Nazi yeGermany inowirirana - marudzi
Nazi Germany vanoyambuka - iyo nzira yekuenda kuhondo
Nazi yeGerman inowira - iyo Weimar Republic
Zvinyorwa zveNazi Germany
Nazi Germany nyaya yemibvunzo
Nazi Germany ndangariro dzemibvunzo - anti-Nazi manhamba
Muchiitiko cheNazi Germany ndangariro - zviitiko 1918-23
Muchiitiko cheNazi Germany ndangariro - zviitiko 1924-32
Muchiitiko cheNazi Germany ndangariro - zviitiko 1933-39
Nazi Germany ndangariro dzemibvunzo - mapoka
Nazi Germany ndangariro quiz - mazano
Nazi Germany ndangariro dzemibvunzo - vatungamiriri
Nazi Germany ndangariro quiz - mazwi uye pfungwa (I)
Nazi Germany ndangariro quiz - mazwi uye pfungwa (II)
Nazi Germany ndangariro dzinodzokorora
Nazi Germany Quiz - zviga zvehupfumi
Quazi yeNazi Germany - Hitler
Nazi Germany Quiz - hupenyu uye basa
Nazi yeGermany Quiz - mitemo yemarudzi
Nazi Germany Quiz - nyika yeNazi
Mibvunzo yeNazi Germany - iyo NSDAP
Nazi Germany Quiz - nzira yekuenda kuhondo
Nazi Germany Quiz - iyo Weimar Republic
Nazi Germany inodenha
Nazi Germany misoro
Nazi Germany ndiani
Nazi yeGerman izwisearch - pfungwa
Nazi Germany izwi rinoti - vanhu
Nazi Germany izwi rinosimbisa - nzvimbo
Nazi Germany mazwi ekuverenga
Nyaya Nazi Germany yakanakidza uye yakashamisa mamirioni avanhu. Yakatanga nekukundikana kweiyo Weimar Republic uye yakapera nekutyisa kweHondo Yenyika II nekuParadza. Pakati, Nazism yakabata mamirioni avanhu uye yakachinja maitiro enhau dzazvino.
VaNazi vaive boka renyika rakanyanyisa rakaumba bato ravo rezvematongerwo enyika mu1919. Kutungamirirwa Adolf Hitler, aichimbova mukambani aimboshanda muHondo yeNyika I, bato reNazi rakaramba riri diki uye risingabatsiri kune mazhinji ema1920.
Kutanga kwe Depression Great uye kurwadzisa kwaakaita kuGerman akaona Hitler nevaNazi vobva vakweva rutsigiro. VaNazi vakazvimiririra senzira nyowani neimwe sarudzo kuvanhu veGerman vaisuwa. Pakanga paine zvishoma zvitsva nezvaHitler neNazi, zvakadaro. Vazhinji vavanocherekedza - masimba ehurumende, hutongi hwesimba, kupisa nyika, Darwinism, kuchena kwemadzinza, kudzoreredza muchiuto uye kukunda - vaive mazano epamberi, kwete remangwana.
Na 1930, maNazi akange ave mubato mukurusa muchiGerman Reichstag (paramende). Tsigiro iyi yakabatsira kugadzwa kwaAdolf Hitler sachigaro munaJanuary 1933.
Hitler nevateveri vake vakava nesimba kwemakore gumi nemaviri asi maitiro avo kuGerman aive akakura. Mukati memakore mashoma, vaNazi vaive vauraya demokrasi uye vakagadzira bato rezvematunhu rimwe chete.
Hupenyu hwemamirioni evaGerman hwakachinjirwa, mamwe kuti ave nani, mazhinji kune hwakaipa. Women vakanzi vadzokere mukati memusha uye vadzingwa mune zvematongerwo enyika nebasa. Children havana kudzidziswa nemazano nehunhu hweNazi. Zvikoro nenzvimbo dzebasa zvakashandurwa kuzadzisa zvinangwa zveNazi. Kuneta kana kukanganisa mitezo yemagariro kana madzinza - kubva MaJuda ku kurwara nepfungwa -Akabviswa kana kubviswa.
VaNazi vakashorawo nyika ne kumutsidzira iyo inoshungurudza militarism yakanga yapinza Germany muHondo Yenyika I makumi maviri emakore apfuura. Pakupedzisira, mukupedzisira kwe1930s, Hitler akatanga nezvekuwedzera nzvimbo yeGerman, mutemo wakakonzera hondo yakaipisisa munhoroondo yevanhu.
Alpha Nhoroondo yeNazi Germany webhusaiti ndeye yakazara zvinyorwa-zvemhando zvekushandisa pakudzidza kusimuka kweNazi neGerman pakati pe1933 ne1939. Iyo ine mazana emazana epakutanga uye chechipiri zvinyorwa, kusanganisira zvakadzama misoro yenyaya uye zvinyorwa. Webhusaiti yedu inewo zvinyorwa zvekureva se nguva, glossaries, ndiani 'ndiani' uye ruzivo pa nhoroondo. Vadzidzi vanokwanisa zvakare kuyedza ruzivo rwavo uye nekurangarira nemhando dzakasiyana dzezviitiko zvepamhepo, zvinosanganisira mibvunzo, crosswords uye manzwi emashoko. Kwekutanga zvinyorwa parutivi, zvese zvirimo paAlpha Nhoroondo zvakanyorwa nevadzidzi vanokwanisa uye vane ruzivo, vanyori uye vanyori venhau.
Tsvaga iyi site:
Hondo Yenyika I